I-China 7 Inch Double Row Diamond Ukugaya iiVili zeNdebe zeMveliso ye-Angle Grinder kunye neFektri IBontai
7 Inch Double Umqolo Diamond Ukusila Cup Wheels for Angle Grinder
7 Inch Double Row Diamond Ukugaya iiVili zeNdebe zisetyenziselwa ukugaya zonke iintlobo zegranite, imarble, imigangatho ekhonkrithi.Ingangena kwii-grinders ezibambe ngesandla kunye noomatshini bokugaya imigangatho.Iibhondi zensimbi ezahlukeneyo zinokwenziwa ngokwemigangatho eyahlukeneyo. ukukhutshwa kothuli kwendalo kunye nokuphuculwa.
Iimpawu: 6 # - 400 #
Umngxunya weziko (umsonto): 7/8 "-5/8", 5/8 "-11, M14, M16, M19, njl
Lobukhulu: Ububanzi be4 ", 5", 7 "
Isicelo: Ukulinganisa kwi-grind grinders okanye kumatshini wokusila womgangatho ukusila zonke iintlobo zemigangatho yesamente.
7 intshi Double Umqolo Diamond Ukusila Cup Wheels
4 ", 5", 7 "(Obunye ubungakanani bunokwenziwa ngokwezifiso)
Ithambile kakhulu, ithambile, ithambile, iphakathi, inzima, inzima kakhulu, inzima kakhulu
7/8 "-5/8", 5/8 "-11, M14, M16, M19, njl
Ukugaya zonke iintlobo zekhonkrithi, iiterrazzo, igranite kunye nemigangatho yemarble
Ukucaciswa kugqityiwe kwaye kwahlukile. Ngohlobo olwahlukileyo kunye nobungakanani ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abaninzi.
2. Ibhalansi elungileyo iqinisekisa ukusebenza kokugaya okugqwesileyo.
3. Ungaze uphawule ilitye kwaye utshise umphezulu welitye.
4. Ibhalansi elungileyo iqinisekisa ukusebenza kokugaya okugqwesileyo.
5. Ixesha elide kunye nokusebenza okuzinzileyo.
6. Ixabiso lokhuphiswano kunye nomgangatho ophezulu.
7. Ukusebenza okuphezulu.
Le mveliso inkulu ngokugaya umphezulu okrwada wekhonkrithi kunye nezinto zokwakha. Uyilo lomqolo ophindwe kabini lokususa ngokufanelekileyo izinto ezinzima kunamavili anemigca enye, ubomi benkonzo ende, uzinzo oluphezulu, ukususwa kwezinto ngokukhawuleza nangakumbi kunye nemveliso.
Eli vili lokusila ledayimane linokuxinana okuphezulu kwedayimane, ixesha lenkonzo ende, ukususwa kwezinto ezinoburharha, kwaye ngokukhawuleza okukhulu ekwakhiweni kwamatye, kwilitye nakwikhonkrithi! Ukusika isenzo. Uyilo lwe-porosity luyanceda ukugcina kunye nokupholisa ipateni yokusika kunye nokunciphisa ukunxiba, okukhokelela kwipateni yokuqala yedayimane yokuqala.
Egqithileyo 5 intshi Double Umqolo Diamond Ukusila Cup Wheels
Okulandelayo: Izixhobo ezi-4 intshi eziSirhubhe seDayimane yeTyhubo yeKhonkrithi kunye neLitye
Iivili zeNdebe yeDayimani zenzelwe ukuba zisetyenziselwe ukugaya okomileyo kwekhonkrithi kunye nezinye izinto zokwakha ukuhambisa umphezulu ongalinganiyo nokususa ukudanyaza. Idayimane yediski ibonelela ngama-350x kubomi beebrasives eziqhelekileyo kwaye ivumela ukususwa kwezinto ezinobundlobongela. Uluhlu oluphindwe kabini lweerimani kwezi blade zibonelela ngokususwa okunzima kwezinto kunye nokubonelela ngobomi obude.
4 Inch Ukusila Ivili
7 intshi Diamond Ukusila Ivili
Abrasive Ukugaya Akwazi
Isondo leChina Cup
China Diamond Cup Ukusila Ivili
I-China yoMvelisi weLitye lokuSila iNdebe yeVili yokuSila
Isondo laseTshayina lokuPolisha iTye
Concrete Ukusila Disc
Indebe Ukusila Ivili
Ikomityi yokuguba kweNdebe emile
Ukucanda Disc Ukugaya Wheel
Diamond esirhabaxa Ukugaya Akwazi
Iivili ezirhabaxa zedayimane
Ivili leBhloko yeDayimani
Diamond Concrete Ukusila Disc
Diamond Cup Ukusila Ivili
Ivili leDayimane yeNdebe
Idayim yeNdebe yeDayimani 4 Inch 7inch
Diamond Cup Ivili lokusila Granite
Ivili leDayimani yeNdebe yeDayimani yevili lokugaya
IDiski yokuKhangela iDayimane
Ivili lomsiki weDayimani
Ivili lokusika iDayimane
Diamond Floor Ukusila Disc
Diamond Floor Ukugaya Akwazi
idayimani lokusila ikomityi yevili
Diamond Ukugaya Disc for eziphathekayo
Diamond Ukugaya Akwazi
Isixhobo seGayimani sokuSila
Izixhobo zokusila zeDayimane
Ivili lokusila leDayimane
Diamond Wheel Ukusila for eziphathekayo
Idayimani yokusila yelitye
Diamond Round wokucoca Ivili Granite
Iivili zeNdebe yeDayimane yeTurbo
Ivili lokuSila eliBini
Umqolo ophindwe kabini ngevili leNdebe
iivili zekombe ezimbini zerowu
Umqolo ophindwe kabini ngeVili leDayimani
amacandelo omqolo aphindwe kabini
Isondo loMgangatho weSondo
Ukusila Disc Disc
Ukusila ikomityi yevili
Ukusila iivili zeNdebe
Ukugaya Disc for eziphathekayo
Izixhobo zokusila zekhonkrithi
Ukugaya Ivili leKhonkrithi
Ukugaya & wokucoca Disc
Ivili leNdebe yeDayimani eyahluliweyo
Amavili okusila acocekileyo
Ivili lokuSila leTubo Row
Ivili lokuSila leNdebe yeTurbo
Ivili lendebe yeTurbo
Ivili lokuguba ledayimane leTurbo
10, Turbo izahlulo diamond ikomityi lokusila ...
7, 6 Amacandelo TGP Diamond ivili lokusila ...
7, T-Imilo eziphathekayo grinder diamond idayimane ...
7, TGP Diamond Ukusila Cup Wheel for Con ...